“သူ့ကျမှ နှလုံးခွဲ လည်ပင်းခွဲရ ဗိုက်အကြိမ်ကြိမ်ခွဲခံရတဲ့ အခက်ခဲတွေကြား အသိမှတ်ပြု မခံရတော့ လောကကြီးမှာ ဆက်မနေချင်တော့ဘူး ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး – Myanmar Update News
“သူ့ကျမှ နှလုံးခွဲ လည်ပင်းခွဲရ ဗိုက်အကြိမ်ကြိမ်ခွဲခံရတဲ့ အခက်ခဲတွေကြား အသိမှတ်ပြု မခံရတော့ လောကကြီးမှာ ဆက်မနေချင်တော့ဘူး ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
Up To Date | July 22, 2020 | Celebrities | No Comments
ကိုယ့်ကျမှ နှလုံးခွဲ လည်ပင်းခွဲရ ဗိုက်အကြိမ် ကြိမ်ခွဲခံရ အခက်အခဲ အများကြီးရှိတဲ့ ကြားထဲ အသိအမှတ် အပြုမခံရတော့ လောကကြီးမှာဆက်မနေချင် တော့ဘူး “လို့ သူမရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး
သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး ကတော့ တချိန်က ကြော်ငြာ ဘုရင်မလို့ တင်စားရ လောက်အောင် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်သလို အကယ်ဒမီ ဆုတွေကိုလည်း အလီလီကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်မှန်း
ပရိသတ်ကြီး သိရှိကြမှာပါ။ ယခု အချိန်မှာတော့ မထက်တစ်ယောက် သေချင်လောက် အောင်ကို စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီး အရာရာတိုင်းကို လက်လျှော့လိုက်ချင်ပြီလို့ ပြောဆိုလာခဲ့တာပါ။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ သူမအတွက်
Ve Ve Company ကသိန်း ၁၀၀ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ဒီလို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူမအနေနဲ့ အခုလို ခက်ခဲနေချိန်မှာ သူမတချိန်က ကြော်ငြာတွေနဲ့ အတူတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Ve Ve က အခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာကို ဝမ်းသာမိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
မထက်က အခုလက်ရှိသူမရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေ အနေကို “အခုဗိုက်ခွဲထားတဲ့ ဒဏ်ရာကတော့ မသက်သာ သေးပါဘူး။ နောက် ၂ ရက် ၃ ရက်နေရင် ပြန်ပြရမှာပေါ့။ကောင်းကောင်း အနားမယူလို့ လို့တော့ ဆရာမက ပြောပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးသွားရင် ၂ လလောက်တေ့ာ နားသင့်တယ်ပေါ့။ ကိုယ်ကမနားပဲ ချက်ချင်းအလုပ်ထဲဝင်တယ်…ပြီးတော့ အနာကြီးရှိရဲ့ သားနဲ့လည်း လိမ့် ကျသွားတယ် ဆိုတော့ အဲ့လို အတွင်းချုပ် ရိုးတွေက မကောင်းသေးဘူးပေါ့ ”
လို့ဖွင့်ဟ လာခဲ့ပါတယ်။”မင်းသမီးတွေလဲ အ များကြီးပဲ ကိုယ့်လို နှလုံးခွဲရတယ် ဆိုတာမရှိဘူး။ လည်ပင်း ခွဲလိုက်ရတယ် ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ ကျန်တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပဲ ကိုယ့်လို ဗိုက်ကို ခဏခဏခွဲရတယ်
ဆိုတာမရှိဘူး…. အော်ငါကျမှ ဖြစ်တာပဲလားပေါ့နော်…. တခါတလေကျရင် လူ့ဘဝကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ မလျှောက်ချင် တော့ဘူးလို့ ခဏခဏပဲတွေးမိတယ် ဒီလောကကြီးမှာဆက် မ လျှောက်ချင် တော့ဘူးလို့ ခဏခဏ တွေးမိတယ်။
ပိုက်ဆံ တစ်ခုတည်း ခက်ခဲတာ မဟုတ်ပါဘူးကျန်ူတဲ့အရာတွေ အကုန်လုံးကလည်းအများကြီးပဲ ခက်ခဲတယ်”ဆိုပြီးရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟလာခဲ့တာပါ။ “ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေနေ ဘယ်တော့မှလည်း
အကောင်း ပြောမခံရဘူး…. တခါတလေတော့လည်း ဝမ်းနည်းတာပေါ့။ စိတ်ဓာတ်လည်းအ ရမ်းကျတယ်။ ငယ်တုန်းကတော့ မိဘနဲ့ တူတူမနေရဘူး ဟိုလူ့နား ပြေးကပ်လိုက် ဒီလူ့နားပြေးကပ်လိုက်နဲ့ တခါတလေ အဖေ့ကိုလည်း
စိတ်မကောင်းဘူး ငယ်ငယ်တုန်း ကတော့ ပစ် ထားပြီးတော့မှ အခုကျတော့ အကုန်လုံးက ခါး စည်းပြီး ကိုယ်တစ်ယောက် တည်းခံရတယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး…ဒါမဲ့ မိဘနဲ့သားသမီး ဆိုတော့ အကောင်းဆုံးတော့
အဖေ့ကို မရှိတာရှိတာ အကုန်လုပ် ပေးမယ်လို့ တော့ စိတ်အားတင်းပြီးနေတာပဲ…. တကယ်ကျတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး လူတောထဲလည်း မသွားချင် လောက်အောင် ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုလာခဲ့တာပါ။
သူမအတွက် သူမပရိသတ်တွေကသာ အားတင်းစရာဖြစ်တာမို့ သူမကိုဆက်ချစ် ဆက်အားပေးပေးပါ လို့လည်း တောင်းဆို သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ ထက်ထက်မိုးဦး တစ်ယောက် စိတ် ဓာတ်ကျပြီ
းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောကြားလာတဲ့ စကားသံတွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲ မထက်ကို ချစ်ကြသေးရင် အားပေးစကားလေးပြောပေးခဲ့ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နေ်ာ။ Source – Shwe Yaung Myanmar
“ကိုယျ့ကမြှ နှလုံးခှဲ လညျပငျးခှဲရ ဗိုကျအကွိမျ ကွိမျခှဲခံရ အခကျအခဲ အမြားကွီးရှိတဲ့ ကွားထဲ အသိအမှတျ အပွုမခံရတော့ လောကကွီးမှာဆကျမနခေငျြ တော့ဘူး “လို့ သူမရဲ့ အခကျအခဲတှကေို ဝမျးနညျးစှာ ရငျဖှငျ့လာတဲ့ သရုပျဆောငျ ထကျထကျမိုးဦး
သရုပျဆောငျ ထကျထကျမိုးဦး ကတော့ တခြိနျက ကွျောငွာ ဘုရငျမလို့ တငျစားရ လောကျအောငျ ထငျရှားခဲ့တဲ့ နိုငျငံကြျောမငျးသမီး တဈလကျဖွဈသလို အကယျဒမီ ဆုတှကေိုလညျး အလီလီကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီး တဈလကျမှနျး
ပရိသတျကွီး သိရှိကွမှာပါ။ ယခု အခြိနျမှာတော့ မထကျတဈယောကျ သခေငျြလောကျ အောငျကို စိတျဓာတျကနြပွေီး အရာရာတိုငျးကို လကျလြှော့လိုကျခငျြပွီလို့ ပွောဆိုလာခဲ့တာပါ။ ထကျထကျမိုးဦးရဲ့ ဖခငျဖွဈသူနဲ့ သူမအတှကျ
Ve Ve Company ကသိနျး ၁၀၀ ထောကျပံ့ပေးတဲ့ အခမျးအနားမှာ ဒီလို ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပွီး သူမအနနေဲ့ အခုလို ခကျခဲနခြေိနျမှာ သူမတခြိနျက ကွျောငွာတှနေဲ့ အတူတှဲဖကျလုပျကိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ Ve Ve က အခုလိုထောကျပံ့ပေးတာကို ဝမျးသာမိတယျလို့လညျးဆိုပါတယျ။
မထကျက အခုလကျရှိသူမရဲ့ကနျြးမာရေး အခွေ အနကေို “အခုဗိုကျခှဲထားတဲ့ ဒဏျရာကတော့ မသကျသာ သေးပါဘူး။ နောကျ ၂ ရကျ ၃ ရကျနရေငျ ပွနျပွရမှာပေါ့။ကောငျးကောငျး အနားမယူလို့ လို့တော့ ဆရာမက ပွောပါတယျ။
ခှဲစိတျပွီးသှားရငျ ၂ လလောကျတေ့ာ နားသငျ့တယျပေါ့။ ကိုယျကမနားပဲ ခကျြခငျြးအလုပျထဲဝငျတယျ…ပွီးတော့ အနာကွီးရှိရဲ့ သားနဲ့လညျး လိမျ့ ကသြှားတယျ ဆိုတော့ အဲ့လို အတှငျးခြုပျ ရိုးတှကေ မကောငျးသေးဘူးပေါ့ ”
လို့ဖှငျ့ဟ လာခဲ့ပါတယျ။”မငျးသမီးတှလေဲ အ မြားကွီးပဲ ကိုယျ့လို နှလုံးခှဲရတယျ ဆိုတာမရှိဘူး။ လညျပငျး ခှဲလိုကျရတယျ ဆိုတာလညျး မရှိဘူး။ ကနျြတဲ့ သူတှလေညျး အမြားကွီးပဲ ကိုယျ့လို ဗိုကျကို ခဏခဏခှဲရတယျ
ဆိုတာမရှိဘူး…. အျောငါကမြှ ဖွဈတာပဲလားပေါ့နျော…. တခါတလကေရြငျ လူ့ဘဝကွီးမှာဆကျပွီးတော့ မလြှောကျခငျြ တော့ဘူးလို့ ခဏခဏပဲတှေးမိတယျ ဒီလောကကွီးမှာဆကျ မ လြှောကျခငျြ တော့ဘူးလို့ ခဏခဏ တှေးမိတယျ။
ပိုကျဆံ တဈခုတညျး ခကျခဲတာ မဟုတျပါဘူးကနျြူတဲ့အရာတှေ အကုနျလုံးကလညျးအမြားကွီးပဲ ခကျခဲတယျ”ဆိုပွီးရငျထဲက ခံစားခကျြတှကေို ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာပါ။ “ကိုယျဘယျလောကျပဲကောငျးနနေေ ဘယျတော့မှလညျး
အကောငျး ပွောမခံရဘူး…. တခါတလတေော့လညျး ဝမျးနညျးတာပေါ့။ စိတျဓာတျလညျးအ ရမျးကတြယျ။ ငယျတုနျးကတော့ မိဘနဲ့ တူတူမနရေဘူး ဟိုလူ့နား ပွေးကပျလိုကျ ဒီလူ့နားပွေးကပျလိုကျနဲ့ တခါတလေ အဖကေို့လညျး
စိတျမကောငျးဘူး ငယျငယျတုနျး ကတော့ ပဈ ထားပွီးတော့မှ အခုကတြော့ အကုနျလုံးက ခါး စညျးပွီး ကိုယျတဈယောကျ တညျးခံရတယျဆိုတော့ စိတျမကောငျးဘူး…ဒါမဲ့ မိဘနဲ့သားသမီး ဆိုတော့ အကောငျးဆုံးတော့
အဖကေို့ မရှိတာရှိတာ အကုနျလုပျ ပေးမယျလို့ တော့ စိတျအားတငျးပွီးနတောပဲ…. တကယျကတြော့ စိတျဓာတျကပြွီး လူတောထဲလညျး မသှားခငျြ လောကျအောငျ ဖွဈနပွေီလို့ ဆိုလာခဲ့တာပါ။
သူမအတှကျ သူမပရိသတျတှကေသာ အားတငျးစရာဖွဈတာမို့ သူမကိုဆကျခဈြ ဆကျအားပေးပေးပါ လို့လညျး တောငျးဆို သှားခဲ့ပါသေးတယျ။ဒါကတော့ ထကျထကျမိုးဦး တဈယောကျ စိတျ ဓာတျကပြွီ
းဝမျးနညျးစှာနဲ့ ပွောကွားလာတဲ့ စကားသံတှကေို ပွနျလညျတငျဆကျပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။အားလုံးပဲ မထကျကို ခဈြကွသေးရငျ အားပေးစကားလေးပွောပေးခဲ့ကွဖို့ မတ်ေတာရပျခံခငျြပါတယျနျော။ Source – Shwe Yaung Myanma
ဆရာလေး မစိဏ္ဏဝတီ အဖြစ် သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မိစန္ဒီ
အဆိုကျော် အောင်ထက်ကို ရထားတာ အစ်မတို့ ဂီတလောက အတွက်တော့ ရတနာတစ်ပါးပဲလို့ပြောလာတဲ့ တင်ဇာမော်